Thu, 03/22/2018 - 21:17
Wed, 03/21/2018 - 21:56
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tababar u soo xiray askar ka mid noqoneysa Ciidanka Asluubta ayaa sheegay in dhammaan qeybaha kala duwan ee Ciidamada Qalabka Sida ay ka qeyb qaadanayaan dagaalka dalka looga xoreeynayo argagixisada Alshabaab.
Tue, 03/20/2018 - 19:08
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga tacsiyeeyay madaxda iyo shacabka aan walaalaha nahay ee Jamhuuriyadda Jabuuti geeridii ku timid, Alle ha u naxariistee, marxuum Barkat Gourad Hamadou oo Raiisul Wasaare kasoo noqday dalkaas intii u dhaxeysay 1978-dii – 2001dii.
Mon, 03/19/2018 - 19:45
Garoowe:-Taliye ku xigeenka ciidanka Daraawiishta Puntland S/Guuto. Deyr Xaaji Cabdi ayaa warqad is-casilaad ah u gudbiyay madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxammed Cali (Gaas).
S/Guuto Deyr Xaaji Cabdi Taliye ku xigeenka ciidanka Daraawiishta Puntland ayaan wax faahfaahin ah ka bixin sababaha uu isku casilay wuxuuna ku soo koobay duruufa jira awgeed.
Hoos ka Akhriso Warqada Iscasilaada Taliye ku xigeenka ciidanka Daraawiishta Puntland S/Guuto. Deyr Xaaji Cabdi,
Jawaari ayaa isgau sheegay inuusan is casilayn, waxaana uu sheegya inuu diyaar u yahay in mooshinka ka dhanka ah loo qaadi cod. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbxintan kasoo diray Muqdisho.
Muqdisho:-Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxammed Sh. Cismaan(Jawaari) oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu qablay mooshinkii laga keenay wuxuuna ku baaqay in cod la galiyo .
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Prof Maxamed Sheekh Cismaan(Jawaari) ayaa beeniyay warar saacadihii la soo dhaafay la soo geliyay baraha bulshada ku wada xiriirto kuwaas oo sheegay in uu xilka iska casilayo Gudoomiye Jawaari wuxuuna ku tilmaamay mid riyo ah .
Hoos ka Daawo Shirka jaraa’id uu Gudoomiayaha Baarlamaanka DFS uu ku qabtay magaalada Muqdisho.
Boosaaso:- Ciidanka Amniga Puntland (PSF) ee sida gaarka ah u tababaran ayaa waxay soo geba gebeeyeen hawlgallo dagaal oo ka dhan ah ururka Al Shabaab oo ay saddexdii maalmood ee la soo dhaafay (14-16 March 2018) ka wadeen deegaanada buuraleyda Dhagax dhaabur,Madarshoon,Karin Xagarood iyo Diindigle ee Buuraha Cal Madow.
Ciidanka Amniga Puntland (PSF) waxay hawlgalladan ku dileen 18 xubnood oo ka tirsan ururkaa Al Shabaab. Ciidanka PSF oo fariin qoraaleed ku baahiyey barta ay ku leeyihiin baraha bulshada ayaa sheegay in ay sii wadi doonaa hawlgallada ka dhanka ah kooxah Al-shabaab oo ay xuseen in ay cadaw ku yihiin Puntland ayna doonayaan in ay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaa kuwa ku nool deegaanada Puntland.
Sat, 03/17/2018 - 13:04
Muqdisho:-Hay’adda culumada soomaaliyeed ayaa maanta Bayaan ka soo saartay Khilaafka Siyaasadeed ee ka curtay Madaxada DFS waxaana uu Khilaafku si gaara uga dhexeeyaa Raisulwasaaraha DFS iyo Gudoomiyaha golaha shacabka ee JFS Mr Jawaari.
Nuqul ka mid ah Bayaanka Hay’adda culumada soomaaliyeed ayaa waxaa uu soo gaaray Halgan.net waxaana uu u qorna sidan.
Fri, 03/16/2018 - 08:40
Kismaayo:-Kulanka maanta waxaa lagaga hadlay biyo la’aan ka jirta Degmada Afmadow iyo deegano kale oo katirsan Jubbaland waxaana golahu uu warbixin ka dhagaystay xubno katirsan Xukuumada oo maalmahii lasoo dhaafay loo xil saaray in qiimayn ay ku sameeyaan sidii gargaarka biyo dhaaminta loo dardar galin lahaa iyo amba qaadka qorshe waara oo aan mar danbe biyo yaraantu kusoo noqon deegaanadaas.
Xubnaha golaha Wasiiradu waxay bogaadiyeen gurmadka Xukuumada iyo Shacabku ay ka wadaan meelaha biyo la’aantu ay ka jirto iyadoo la isku raacay in kaalmo dheeri ah la gaarsiiyo meelaha dhibaataa ugu daran ay ka jirto.
Dhinaca kale waxaa golahu ay ka doodeen caqabado maalmahii lasoo dhaafay ka taagnaa dhulka Dowlada waxaana golahu uu meel mariyay in dhamaan dhulka dhisan iyo midka banaan ee Dowlada ay yihiin lama taabtan cidii ku xad gudubtana sharciga la marsiinayo.
Dhamaan Dadweynaha ku nool Magaalada Kismaayo iyo deeganada kale ee Jubbaland ayaa looga digay in aysan ku kadsoomin iibsashada iyo dhismaha ama deegaamaynta Xarumaha danta guud.
Dhinaca kale golahu wuxuu ku booriyay Wasaarada Maaliyada in ay sii dardar galiso hawlaha midaynta dakhliga Dowlada iyadoo Wasaaradu ay meel wanaagsan marinayso midaynta Canshuuraha dhamaan deeganada Jubbaland.
Qorshaha midaynta dakhliga Dowlada ayaa la gaarsiinayaa dhamaan deeganada iyo Degmooyinka xorta ah ee Jubbaland bilowga Sanadkan.
Garoowe:-Shirkii Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland oo uu shir-guddoominayey Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Ka Qabsoomey Magaalada Garoowe ee xarunta dowlada Puntland waxaana looga hadlay arimo kala duwan.
Thu, 03/15/2018 - 14:50
Baydhabo:-Wasiirada Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka ee Dawladda Dhexe iyo Dawlad Goboleedyada iyo Xubno ka socda Maaamulka Gobolka Banaadir ayaa maanta ku shirsan magaalada Baydhabo iyaga oo isugu yimid ka qaybgalka shirka afaraad ee Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka oo sedexdii bilba mar qabsooma.
Madaxweynaha DFS oo Kormeeray Isbitaalka Ciidanka Xoogga Dalka (Masawiro)
Wed, 03/14/2018 - 21:04
Muqdisho:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kormeer ku tagay Isbitaalka Ciidanka Xoogga Dalka ee magaalada Muqdisho ayaa ku ammaanay hoggaanka caafimaadka iyo howl-wadeennada Isbitaalkan sida ay ugu adeegayaan ciidanka, iyagoo ku shaqeynaya duruufo adag iyo agab aan dhammeystirnayn.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo daahfuray kulan lagu horumarinayo degmooyinka Puntland.[ Video]
Garoowe:-Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Eng Camey ayaa kulan kaga qeyb galay magaalada Garoowe ,kulankaas oo ay iskugu yimaadeen masuuliyinta ka kala yimid degmooyinka Puntland waxaan kulanka looga wada hadlay horumarka ay ku talaabsadeen degmooyinka Puntland waxaan ay wasaarada arrimaha gudaha ay balan qaadeen in ay ka gacan siin doonto dhinac horumarka degmooyinka Puntland.
Hoos ka Daawo Madaxweyne ku Xigeenka Puntland ayaa kulan kaga Qeyb galay Garoowe
Hay,ada Laanta Socdaalka Iyo Jinsiyaddaha JFS oo dib u furtay xafiiskeedii Garoowe.[Video]
Wed, 03/14/2018 - 12:01
Garoowe:-Hay,ada Laanta Socdaalka Iyo Jinsiyaddaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Sheegtay in ay Shaqadii Xafiiska Garowe ee Hay,ada ay cayrisay Saraakiil Lagu eedeyay gudasho La,aaan Waajibadkoda Shaqo.
Masuuliyiinta Hay,ada Laaanta Socdaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxba kama jiraan ku tilmaamay Warar ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahintu kuwaas oo sheegayay in ay hakad gashay shaqada Xafiiska Hay,ada ee Garoowe.
Qaar ka mid ah Warbaahinta ayaa Sheegay in uu jiro khilaaf Siyaasadeed oo u dhexeeya Xafiisyadda Hay,ada ee Xarumaha Garowe iyo Muqdisho Balse Hay,addu Arrinkaasi Waa ay Beenisay.
Hoos ka Daawo Hay,ada Laanta Socdaalka Iyo Jinsiyaddaha JFS oo dib u furtay xafiiskeedii Garoowe
Wasiirka Cadaaladda Dowladda Puntland oo la kulmay Wafti ka socday safaaradda Norway.[Masawiro]
Garoowe:-Wasiirka Cadaaladda Dowladda Puntland oo ay weheliso Wasiirka Haweenka ayaa kulan la qaatay maanta wafti ka socday safaaradda Norway ee Soomaaliya. Kulankaan oo ay ka soo qayb galeen hay’ado ay ka mid ahaayeen Save the Children, Care International iyo NCA ayaa waxaa looga hadlaayay ka hortaga tacadiyada haweenka iyo dhaqan gelinta xeerka kufsiga oo ay ka wada shaqeeyaan labada Wasaaradood.
Wasiirka Cadaaladda waxaa uu ka hadlay heerka ay puntland ka joogto tacaddiyada loo gaysto haweenka cid walba oo lagu helo danbiyadaasna la marsiiyo sharciga Wadanka qof ka sarreeyaana uu jirin.
“Wasaaradda Cadaaladda waxaa ka go’an mar walba dabagalka dhaqangelinta sharciyada ay samayso si aan u ilaalinno xuquuqda aadanaha ee dadwaynaha reer Puntland” ayuu yiri Wasiirka Cadaaladda Puntalnd Saalax Xabiib Jaamac.
Muqdisho:-Golaha Baarlamaanka dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxaa uu si rasmi ah u ansixiyay xeerka dhowrista gobanimada iyo Midnimada dalka Soomaaliya waxaan Golaha shacabka ay ka mamnuucaya shirkada DP World gudaha dalka Soomaaliya. Dhinac kale Madaxweynaha JFS Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya inay soo dhowaynayso shirkad iyo dal kasta oo doonaya inay maal gashi ku sameeyo dalka Soomaaliya, balse loo baahanyahay in la soo maro wadada sharciga ah.
Hoos ka akhriso Golaha Baarlamaanka dowladda Federaalka Soomaaliya
Hargeysa:-Madaxweynaha S/land Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa uu waraysi gaar ah siiyey Tv-ga Horn Cable ayaa waxaa uu ka waramay heshiiska S/land uu la galay shirkadda DP-World ee laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta, heshiiska oo ay diideen Madaxda ugu saraysa dowladda Federaalka Soomaaliya.
Hoos Ka Daawo Waraysiga Madaxweynaha S/land Muuse Biixi Cabdi uu siiyey Tv-ga Horn Cable